Fa maninona i Jamaica sy St. Kitts no mbola azo antoka hitsidika azy?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fa maninona i Jamaica sy St. Kitts no mbola azo antoka hitsidika azy?
Janoary 31, 2021
Tsy nisy olona maty tany St. Kitts any COVID. Tao Jamaika dia olona 350 no maty. Midika ve izany fa tsy azo antoka kokoa i Jamaika? Tsy dia izany loatra.
Mijanona ho any an-danitra i Jamaika raha oharina amin'ireo isa voarakitra any Etazonia, Kanada na UK Nahoana no nampiato ny sidina i Canada? Ny valin'ny minisitry ny fizahantany any Jamaika Edmund Bartlett dia manana valiny ary tsapany fa manantitrantitra ny fanapahan-kevitr'i Canada izany
Jamaica dia nandrakitra tranga 5273 COVID-19 isaky ny iray tapitrisa, St. Kitts ihany 693.
Jamaika dia manakaiky ny 3 tapitrisa olom-pirenena, St. Kitts dia latsaky ny 54,000.
Tany Jamaika, ny fizahan-tany dia misokatra sy mora vidy mandritra ny areti-mandringana, ao St. Kitts dia misy famerana ny fizahan-tany ihany ho an'ireo vonona hijanona mandritra ny herinandro sy vonona handany vola be hanaovana izany.
Midika ve izany fa tsy azo antoka kokoa i Jamaika? Tsy dia izany loatra.
Raha ampitahaina dia mitatitra tranga 80,485 1359 isan-tapitrisa i Etazonia ary 15 isan-tapitrisa ny olona maty tany Etazonia. Mahatonga an'i Etazonia mihoatra ny XNUMX heny mampidi-doza ny mandeha lavitra noho ny any Jamaika.
I Hawaii no manana ny taha ambany indrindra amin'ny COVID-19 any Etazonia ary mitatitra tranga 18259 isan-tapitrisa. Mahatonga an'i Hawaii 3 1/2 heny hampidi-doza kokoa ho an'ny mpitsidika noho ny an'i Jamaika.
Any Canada dia 20,512 isan-tapitrisa no voan'ny virus ary 528 isan-tapitrisa no maty.
Ny fampitahana iray manan-danja kokoa dia ny Fanjakana Mitambatra miaraka amin'ny 56,057 voan'ny isan-tapitrisa ary 1,559 no maty.
Ho an'ny mazava: Miorina amin'ny olona iray tapitrisa ny fampitahana. Tsy misy dikany ny mampitaha isa amin'ny isa raha mampitaha firenena misy olona an-tapitrisany amin'ny firenena 50,000 53,418 monja. St. Kitts dia tsy manana afa-tsy 693 olom-pirenena. Tranga 37 isan-tapitrisany tao St. Kitts no niova ho tranga 35 fotsiny, 5,273 amin'ireo no tafarina. Ho an'i Jamaika tranga 15,778 isaky ny tapitrisa dia midika tranga 12,068 XNUMX izay XNUMX no tafaverina.
Raha mijery ny antontan'isa mampalahelo toy izany, Jamaica sy St. Kitts miaraka amin'ny ankamaroan'ny firenena Karaiba dia mijanona ho tsy manana ahiahy ary toa fialofana tsara ho an'ireo izay te hiala amin'ny viriosy.
Nataon'i Jamaika mora kokoa sy mora kokoa izy io, i St. Kitts dia manamafy azy io fa tsy manararaotra fotoana. Miaraka amin'i Anguilla, i St. Kitts dia mijanona ho faty maimaimpoana i Coronavirus ary miditra amina firenena vitsy an'isa eran'izao tontolo izao amin'ny ligy iray ihany.
Jamaika miaraka amin'ireo fotodrafitrasa fitsangatsanganana sy fizahan-tany be dia be ary ny fivezivezena ho an'ny mpitsidika marobe dia mbola ohatra iray manjelanjelatra amin'ny fomba ahafahan'ny firenena iray mahaleo tena mampiasa ny tombony amin'ny toerana misy ny nosy ary governemanta mahaleo tena malefaka kokoa hitazomana ny orinasam-pizahantany. Jamaica miaraka amina toeram-pialan-tsasatra lehibe rehetra izay afaka mitoka-monina mora foana, toa ny kapa or tora-pasika Misokatra hatrany ny trano fandraisam-bahiny. Manazava ny antony nahatonga an'i Jamaika ho dingana mialoha ny aretina.
Ny Hon. Ny minisitry ny fizahantany Edmund Bartlett avy any Jamaika no tompon'andraikitra manerantany amin'ny tolona hitazomana ny fizahan-tany hisokatra amin'ny fotoana tsy azo atao. Fanapahan-kevitr'i Canadas hampiato ny sidina mankany Mexico sy any Karabean ny herinandro lasa teo dia tsy maintsy ho kapoka nahazo faritra iray izay niezaka tamim-pitandremana mba hiarahaba sy hilamin-tsaina ary mendrika hatrany an'ireo mpizahatany. Bartlett dia manana valiny amin'i Canada ary milaza izany amin'ny resadresaka ataon'ny eTN.
Ho fanampin'ny minisitry ny Jamaika, Andriamatoa Kayode Sutton dia miteny avy amin'ny toerana tsara fitrandrahana azy ao St. Kitts, ny Hotely Royal St. Kitts. Vao niverina tany amin'ny nosy niaviany i Kayode rehefa avy nianatra tany Jamaika. Manazava ny fomba tsy maintsy lalovana izy. "Ao an-trano aho, nefa mbola lavitra ny trano", hoy izy.
Any St. Kitts, izay mpandeha rehetra maniry hijanona ao amin'ny hotely iray ankatoavina ho an'ny "Vacation in Place", tsy maintsy manaraka fitsipika henjana
Ny lalàna Jamaikana dia hita ao amin'ny Tsidiho ny tranokala Jamaica.
Israel dia nanitatra ny fanidiana hidy hatramin'ny zoma
Ny ekipa Aruma Labs dia miara-miasa amin'ny Research Cannabis Applied ho an'ny fandinihana fandinihana endometriozy